Soo-saareyaasha & Qalabka Kexeysta Dibadda | Warshadda Joojinta Dibadda ee Shiinaha
Qalabkan loo adeegsaday astaamaha aluminium ee tayada sare leh, waligaa miridhku, qiiqa qiiqa dusha sare ee qalliinka hawadu. Wuxuu xoojiyay tuubada xarunta, wuxuu siiyaa taageero wanaagsan.
Isbuunyada xumbada xumbada xambaarsan iyo isgacan qaad, ha la adeegsado waa ka raaxo badan tahay, naqshad gaar ah oo tuubbada ah, waxay bixisaa xamuul ammaan ah oo wanaagsan, tuubbo leh tuubbo caag ah iyadoo laga fogaanayo isqabqabsiga birta ee yareynaya khilaafaadka iyo dhawaqa dhawaaqa.
Barkimooyinka caagga ah ee 'Antiskid', waxay bixiyaan awood wanaagsan oo isku dhaca dhulka, gudaha birta birta ah ee Tibet, waxay xoojisaa cimri dhererkooda, waa la hagaajin karaa sare, oo ku habboon dherer kala duwan.
Noocan Nooca Xulka Suugaanta
- Suxulka ku hagaaji xagal ama xaglo kala duwan.
- Qalabka isku-dhafan ee isku-dhafan si loo siiyo taageero adag xusullada.
- Dhererka la hagaajin karo wuxuu ku habboon yahay dhererka cududda ee bukaannada kala duwan.
- Nasashada gacanta ee la saari karo waxay ku dari kartaa raaxada xirashada.
- Xagasha xagasha fudud, toosinta xagalku waa sahlan tahay oo habboon tahay.
- Xaddid jilicsanaanta 'thoracolumbar', kordhinta iyo wareegga.
- In la helo taageero deggan.
- Xaashida balaastigga ee polymerka, xoogga sare, miisaanka fudud.
- Jaangooyada iyo cabbirka toosan waa la hagaajin karaa, oo ku habboon dad badan.
- Dhismo laba qaybood ah oo hore iyo gadaal ah si loo helo taageero adag oo deggan oo lafdhabarta ah.
- Ku dhaji naqshad jilicsan, si wax ku ool ah u kordhisa cadaadiska caloosha, si loo hubiyo xasilloonida thoracolumbar.
- Naqshadeynta naqshadda barkinta shilka, bukaanka ka dhig mid aad u raaxo badan.
Qalabkan qoorta ah wuxuu ka samaysan yahay waxyaabo xumbayn oo tayo sare leh, taas oo hubinaysa adkaanta oo si dhexdhexaad ah loogu laaban karo. Waxay leedahay hagaajin wanaagsan, raaxo sare iyo fududahay in la isticmaalo.
· Qiimaha ugu hooseeya ee warshad tayo wanaagsan leh;
· MOQ hooseeya oo bilaabaya ganacsi yar;
· Muunad bilaash ah si loo hubiyo tayada;
· La kulan heerka amniga ee Yurub iyo USA;
Teknolojiyad gaar ah oo daabacan;
Aqbal amarka dammaanad qaadka ganacsiga si aad u badbaadiso iibsadaha;
Wakhtiga la gaadhsiiyo
Noocan Jilibka-Anqaw-Cagta Ortosis
Cufnaanta sare Thermoplastic:Qaybta ugu muhiimsan waxay ka samaysan tahay cufnaanta sare ee Thermoplastic, Awood sare, miisaan fudud, kiimiko deggan
Naqshad hagaajin ah:Dhererka xargaha, Dhererka bowdada waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo nooca lugta bukaanka ee kala duwan.
Laamiga daawaha ee dhagxaanta leh:Adkaynta laanta daawaha ee labada dhinacba si ay u bixiso taageero deggan.
Jilibka jilicsanaanta iyo kordhinta ayaa la hagaajin karaa, Jimicsi ku habboon hawl qabad la'aan.
Dahaarka lugta oo la feerayo, hawo fiican.
Naqshadaynta Ergonomics,Khibrad xirasho raaxo leh